Usoro mgbakọ na mwepụ
Mgbe anyị banyere ụlọ ahịa eletrọniki iji zụta Smart TV ọhụrụ, n'ọtụtụ oge, anyị ga-ahụ mkpirisi abụọ na teknụzụ teknụzụ: ARE B. mi QLED. Ọ bụ ezie na n'akwụkwọ, ha yiri teknụzụ ndị yiri ya, n'eziokwu, mkpirisi abụọ a na-egosipụta teknụzụ abụọ dị iche iche na nkewa dị iche iche maka ogwe ndị mejupụtara akụkụ ngosi nke telivishọn (ya bụ, nke na-ewepụta ihe oyiyi ebugharị).
Ọ bụrụ na anyị nwere obi abụọ banyere acronyms ndị a, anyị ga-ahụ ntuziaka kwesịrị ekwesị: n'okpuru anyị ga-egosipụta, n'okwu ndị dị mfe, Kedu ihe OLED na QLED pụtara na gịnị bụ teknụzụ kachasị mma ugbu a? mgbe anyị na-ekwu maka igwe onyonyo dị elu ma ọ bụ nke adịchaghị (na-akwụ ụgwọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile karịa € 1000). O doro anya na maka teknụzụ ọ bụla ekpuchiri anyị, anyị ga-egosi gị ụfọdụ ụdị Smart TV anyị nwere ike ịtụle, nke mere na ị nwere ike ịga n'ihu n'ịzụ ahịa n'ịntanetị na Amazon (ebe enwere nchekwa mgbe niile ma e jiri ya tụnyere ụlọ ahịa nkịtị ma ọ bụ ebe ịzụ ahịa).
ỌG REGAD AKW :KWỌ: Etu esi ahọrọ ma zụta Smart TV kacha mma
Kedu TV panel ịhọrọ
N’isiakwụkwọ ndị na-esonụ, anyị ga-ebu ụzọ gosi gị ihe ọdịiche dị na teknụzụ abụọ ahụ akpọrọ Na mmeghe nke isiokwu ahụ na, dị ka ezigbo nduzi ọ bụla bara uru maka nnu ya, anyị ga-ahụ usoro ịzụ ahịa anyị ebe ọ ga-ekwe omume ilele igwe onyonyo maka teknụzụ ọ bụla akpọrọ, ka anyị wee nwee ike ịhọrọ ihe nlereanya kachasị dabara na mkpa anyị.
Esemokwu dị n'etiti OLED na QLED
Esemokwu dị iche n'etiti etiti abụọ ahụ dị na nhazi ma sie ike ịfefe, ọbụlagodi na ileba anya mbụ ha yiri ka ha nwere aha yiri ya.
Ogwe OLED nwere ụdị ọkụ ọkụ nwere ike ịmepụ ọkụ nke aka ya, na-enweghị mkpa maka ogwe ọkụ azụ: n'eziokwu, agba niile nke onyonyo ahụ (RGB) na isi ihe ndị na-acha ọcha na-achịkwa ihe ọkụkụ LED pixel site na pixel. Uru mbụ dị maka mmadụ niile iji hụ: mgbe OLED pixel na-apụ apụ, oji bụ n'ezie "oji", ebe ọ na-enweghị ọkụ ọkụ n'azụ iji nyocha. Ọ bụ ihe ndabara na OLED na-enye gị ohere ịnweta ezigbo oji na ọdịiche na-enweghị iji ngwanrọ dị iche iche. N'aka nke ọzọ, nchapụta nke OLED adịghị elu ma, na ihe ngosi dị egwu, ha nwere ike ịta ahụhụ na-adịghị mma (nke ngwanrọ na-akwụ ụgwọ).
Ogwe QLED yiri nnọọ akụkụ LCD rere ya rue ugbua, mana o nwere oke odi iche: na backlight panel mebere ọtụtụ kwantum dot LEDs (Ọnụ ọgụgụ kwantum). Teknụzụ a na-enye ohere ịnweta gamut agba karịa karịa OLEDs na nchapụta dị oke elu (ọbụlagodi okpukpu abụọ nke OLED), na-agbagọghị ọdịiche na ọkwa ojii dị oke (n'ụdị ụfọdụ dị elu ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkwa OLED). . Dị ka ntụpọ anyị na-ahụ ntakịrị oriri ugbu a dị elu, nchapụta dị elu nke nwere ike iwe (mana enwere ike ịhazigharị ya oge niile), na nwa ojii na-ezughị oke mgbe niile, ọkachasị ma ọ bụrụ na enweghị usoro ọ bụla etinyere. Mpaghara obodo O Micro Dimming site n'aka onye nrụpụta (ya bụ, teknụzụ ndị ahụ na-agbanyụ ọkụ ndị anaghị eji mgbe anyị mepụtaghachi mpaghara ojii).
Na ngwụcha ụbọchị enweghị ezigbo onye mmeri: teknụzụ ọ bụla nwere uru na ọghọm ya, yabụ anyị ga-adị mma n'ịhọrọ nke kachasị dabara ụlọ obibi anyị na ọnọdụ ọkụ anyị, dị ka a hụkwara na Nkeji edemede. Ruo ókè TV ma ọ bụ nyochaa nwere ike ịhụ dabere na nha ihuenyo.
N'isiokwu a, anyị ga-anwa igosi gị ụdị TV kachasị mma maka ụdị teknụzụ abụọ ahụ, ka ị nwee ike iji ụdị ndị a tụrụ aro tụnyere ndị a na-ahụ anya na ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa (ebe mmetụta ọhụụ nwere ike bụrụ mkpebi maka ịzụta).
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ilekwasị anya na TV OLED na anyị na-adụ gị ọdụ ka ị hụ bụLG OLED TV AI ThinQ OLED55BX6LB, dị na Amazon maka € 1900.
Na Smart TV a, anyị na-ahụ ogwe OLED 65-inch, 4K UHD mkpebi, HDR nkwado, α7 Gen3 processor na Dolby Vision, ọdịyo na nkwado IQ / Dolby Atmos, ndakọrịta na NVIDIA G-Sync usoro mmekọrịta vidiyo, sistemụ arụmọrụ raara onwe ya nye WebOS ThingQ, njikọ Wi-Fi, Bluetooth, na nkwado maka nnyemaaka Google na ndị na-enyere olu olu Alexa.
Ezigbo TV OLED ọzọ anyị nwere ike ilekwasị anya na anya anyị mechiri emechi bụ Sony KD75XH8096PBAEP, dị na Amazon maka ihe na-erughị € 2000.
Na Smart TV a, anyị na-ahụ ogwe OLED nke 75 inch, mkpebi 4K UHD, nkwado HDR, 4K X-Reality Pro processor, sistemụ TV gam akporo, njikọ Wi-Fi, Bluetooth na nkwado maka ndị enyemaka olu ama ama.
Ọ bụrụ na kama anyị chọrọ ilekwasị anya na teknụzụ QLED anyị na-adụ gị ọdụ ka ị tụlee Samsung Q70T usoro, dị na Amazon maka ihe na-erughị € 2000.
Na TV a, anyị na-ahụ panel QLED nke anụ ọhịa 75-inch, 4K UHD mkpebi, Quantum HDR nkwado, Quantum Dot processor, dimming local system, njikọ Wi-Fi, Bluetooth na sistemụ arụmọrụ raara onwe ya nye (dakọtara na ngwa niile a ma ama).
Ọ bụrụ na kama anyị chọrọ TV QLED dị ala, anyị nwere ike ilekwasị anya na TV TCL 50C711, dị na Amazon maka ihe na-erughị € 600.
TV a magburu onwe ya na-egosipụta panel nke QLED nke 50-inch, mkpebi 4K, HDR 10 + sistemụ, ọkụ ọkụ ọkụ, Dolby Vision system system, nkwado Dolby Atmos, njikwa olu na-enweghị aka, yana sistemụ arụmọrụ gam akporo.
N'ụzọ doro anya, dị ka atụnyere igwe ọ bụla niile, ọ nweghị onye mmeri ọ bụla: ọ bụrụ na anyị hụrụ ikiri ọtụtụ ihe nkiri na ihe nkiri TV n'abalị ma ọ bụ n'ọchịchịrị, ọ ka mma ilekwasị anya na OLED (nke nwere ezigbo mma, miri ojii), ma ọ bụrụ na anyị ka anyị na-ekiri telivishọn na gburugburu ebe obibi na-enwu gbaa, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ilekwasị anya na QLED dị elu, iji weghara agba ọ bụla na nkọwa niile nwere ogo kachasị elu.
Iji jide n'aka na anyị na-azụta kacha mma Smart TV maka mkpa anyị yana na anyị na-azụta na ebe kwesịrị ekwesị ma ọ bụrụ na ọ dị mma ịzụta TV na ntanetị ma ọ bụ na ụlọ ahịa.
Ọ bụrụ na, n'ụzọ dị iche, anyị chọrọ imekwu mkparịta ụka banyere sistemụ arụmọrụ maka Smart TV ma họrọ usoro kachasị mma, anyị na-atụ aro ka ị gụọ isiokwu ndị ahụ Kedu ihe Smart TV pụtara, kedụ uru na ọghọm ya? mi Smart TV kacha mma maka Samsung, Sony na LG App Sistem.
Mma PC ma ọ bụ usoro PS5 / Xbox ka ọ dị mma?
Alternatives na LastPass iji chekwaa okwuntughe n'efu
Otu esi zoo nọmba na WhatsApp
Olee otú Dekọọ Mmemme na Samsung Smart TV
Etu esi agbanwe ụdaolu WhatsApp gị